पूँजीबजारमा सुधारको सङ्केत | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण पूँजीबजारमा सुधारको सङ्केत
on: २४ भाद्र २०७५, आईतवार ०७:०७ लेख | दृष्टिकोण
पूँजीबजारमा सुधारको सङ्केत
पछिल्लो समय निरन्तर ओरालो लागिरहेको शेयरबजार गत हप्ता उकालो लागेको थियो । कारोबार रकम पनि बढेको थियो । यसले लगानीकर्तालाई केही राहत मिलेको छ । यो सुधारको सङ्केत हो भन्ने केही लगानीकर्ताको भनाइ छ । गत हप्ता जुन तरीकाले बजार र कारोबार रकम बढेको थियो, यसले त बजारमा सुधार हुने सङ्केत छ । त्यसो त अहिलेको समय शेयरबजार बढ्ने नै समय हो । सबैजसो वाणिज्य बैङ्कको वार्षिक प्रतिवेदन वासलात प्रकाशित भइसकेको छ । अधिकांश बैङ्कहरूको नाफामा वृद्धि देखिएको छ । पछिल्लो समयमा शेयरबजार निरन्तर ओरालो लागेको कारणले शेयरबजारका लगानीकर्ता बाहिरिएको भन्ने चर्चा चलेको थियो । तर, गत हप्ताको कारोबारलाई हेर्दा बाहिरिएका भनिएका केही लगानीकर्ता फर्किएका हुन् भन्ने पनि चर्चा चलेको छ ।
शेयरबजारप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण कम भएजस्तो देखिएको थियो । अधिकांश ब्रोकरकहाँ लगानीकर्ताको उपस्थिति न्यून मात्र देखिन्थ्यो । कहाँ हराए त लगानीकर्ता भनेर चर्चा चलेको थिए । पछिल्लो समयमा हप्तामा १ अर्बको पनि कारोबार हुन छाडेको थियो । गत हप्ता भने एकै दिन ७० करोडभन्दा बढीको कारोबार भएको थियो । पछिल्लो समयमा नेप्से लगातार घटिरहेको कारणले नेप्से अझै घट्ने डरले लगानीकर्ता लगानी गर्न डराइरहेका थिए । यो स्वाभाविक पनि हो । कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्दा लगानीकर्ताले नाफा नै खोज्छन् । लगानीकर्ताको मनोविज्ञानलाई नियाल्ने हो भने धेरैजसो लगानीकर्ता बजार बढेका बेला लगानी गर्ने गरेको देखिन्छ । गत हप्ताको कारोबारले पनि यस्तै देखाएको छ । कतिपय लगानीकर्ता भने घटेको बेला लगानी नगरेको बताउँछन् । कतिपयको भनाइमा घटेको बेला शेयरमा लगानी गर्नुपर्छ । घटेका बेला अझै घट्छ भनेर लगानी नगर्ने हो भने घटेको बजार कसरी बढ्छ ? शेयरबजार उकालो लाग्नका लागि शेयर किन्ने लगानीकर्ताको लर्को पनि त हुन पर्‍यो नि । शेयरबजारका ठूला व्यापारीले घटेको बेला शेयर उठाउने पनि गरेका छन् । कतिपय ठूला लगानीकर्ता शेयरबजारलाई आफ्नोअनुकूल बनाउने क्षमता राख्छन् भनिन्छ । त्यस्ता लगानीकर्ताले घटेका बेला शेयर उठाउने गरेका छन् । केही ठूला खेलाडीले शेयरबजारलाई आफूअनुकूल बनाउन चलखेल पनि गर्ने गरेको भनाइ पाइन्छ । होल्ड गर्नसक्ने क्षमता भएका लगानीकर्ताले घटेका बेला शेयर खरीद गर्दा फाइदा हुने देखिन्छ ।
बढेको बेला लगानीकर्ता दङ्ग हुन्छन्, कारण खोज्दैनन् । तर, घटेको बेला हारगुहार गर्छन् । यसका कारणहरू खोतल्न थाल्छन् । नियमन निकायहरूलाई दोष दिन थाल्छन् । शेयरबजार घट्न र बढ्न नियमित नै भए पनि यसमा केही कारण भने रहेका हुन्छन् नै । राजनीतिक कारण र कतिपय अवस्थामा शेयरबजारको नियमन निकायका नीति, तरलता आदि कारणले पनि शेयरबजारमा असर गर्ने गरेको छ । सरकार र पूँजी वृद्धिको नीतिले शेयरबजार घटेको मान्ने पनि थुप्रै छन् । कतिपय लगानीकर्ता अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई मान्ने पनि छन् । सरकारले शेयरबजारलाई उकास्न केही पहल गरेन भनेर सरकारको आलोचना पनि गर्ने गरेका छन् ।
शेयरबजार उकालो लाग्नु र ओरालो लाग्नुमा विविध कारण होलान् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने नीति ल्याएकाले बैङ्क तथा वित्त कम्पनीले हकप्रद शेयरको बाढी नै ल्याएकाले शेयरबजार ओरालो लागेको हो । बजारमा शेयरको आपूर्ति बढी भई माग र आपूर्तिको सन्तुलन नमिलेपछि शेयरबजार ओरालो लागेको हो । पछिल्लो समय शेयर बेच्नेहरूको भीडले गर्दा शेयरबजारमा सुधार हुन नसकेको हो भन्दा फरक नपर्ला । नयाँ लगानीकर्ता शेयरबजारमा प्रवेश गर्न डराए तर यो समय नयाँ लगानीकर्ता बजार प्रवेश गर्ने समय हो । नयाँ लगानीकर्ता पनि ‘हेर र पर्ख’को अवस्थामा रहेका छन् । तर, यो कहिलेसम्म रहने हो त्यसैले शेयरबजारको अवस्था निर्धारण गर्नेछ । पछिल्लो समयमा शेयरबजार खस्किँदो अवस्थामा रहे तापनि शेयरबजारका नियमनकारी निकायहरूले यसमा ध्यान दिएका छैनन् । शेयरबजारमा हकप्रद शेयर र बोनस शेयरको बाढी आपूर्ति बढेको छ भने अकोतर्फ, नेपाल धितोपत्र बोर्डले कम्पनीहरूलाई आईपीओ र एफपीओ जारी गर्ने स्वीकृति दिइरहेको छ । विभिन्न कम्पनिहरूले भारी मात्रामा एफपीओ जारी गरेकाले शेयरबजारका लगानीकर्ता यसतर्फ तानिएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ शेयर जारी गर्न दिन केही समयका लागि थाती राख्ने हो भने शेयरबजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।
पछिल्लो समयमा शेयरबजार निरन्तर ओरालो लागिरहेका कारण लगानीकर्ता डराए, हराए । लगानीकर्ता शेयरबजारबाट बाहिरिए भनेर पनि चर्चा नचलेको होइन । बजार ओरालो लागेको भन्दैमा लगानीकर्ता बजारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था भने छैन । शेयरबजार घटेपछि बढ्छ पनि । अहिलेको अवस्थामा शेयरबजारका छोटो अवधिका लगानीकर्तालाई केही बेफाइदाजस्तो देखिए पनि लामो अवधिका होल्डमा बस्ने लगानीकर्ताका लागि भने फाइदाजनक नै देखिन्छ । यो त गत हप्ताको शेयरबजारले पनि देखाएकै छ । शेयरबजार भनेको नै जोखीमको व्यवसाय हो । यसमा जोखीम पनि बढी हुन्छ र फाइदा पनि बढी नै हुन्छ । त्यसैले जोखीम लिन चाहनेका लागि अहिले शेयरबजार उपयुक्त समय मानिन्छ ।